10L mpiorina oksizenina mikoriana tokana ao anaty tahiry ankehitriny
Mpanentana oksizenina 10L tokana ao anaty tahiry ankehitriny, andro vitsivitsy, nanjary matotra kokoa ny tsy fisian'ny concentrator oxygen 10L. Amin'ny fampiasana ny fahombiazan'ny adsorption ny sivana molekiola, amin'ny alàlan'ny fotokevitra ara-batana, miaraka amin'ny compressor tsy misy solika lehibe toy ny heriny, ny azota amin'ny rivotra ...Hamaky bebe kokoa »
Ireo mpiorina oksizenina 10L dia manana tahiry ankehitriny. Androany dia faritra maro no tsy misy mpanentana oksizenina ary maro ny baiko mihodina any amin'ny orinasa sinoa. Arakaraka ny isan'ny mpanjifa miha-maro any Shina, ny fotoana fandefasana mpamokatra ôksizena sinoa dia mihalava hatrany. Ankehitriny ny ora fandefasana ny oksizena ge ...Hamaky bebe kokoa »
Taorian'ny nipoahan'ilay concentrator oxygen tany Gangapur, Rajasthan, dia novonoina ilay vehivavy ary narary mafy ny vadiny
Hita fa nahafaty olona ny fampiasana concentrator ôksizena tsy mandeha amin'ny laoniny ny mpivady tao amin'ny tanànan'ny Gangapur, Rajasthan satria nipoaka ilay fitaovana rehefa novahana. Maty ilay vehivavy ary naratra mafy vokatr'izany ny vadiny. Tany amin'ny distrikan'i Udaimol any Gangapur no nitrangan'izany. A ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no mahasamihafa ny saron-tava KN95 sy KN90?
1. Naoty hafa. Mask KN90 dia manana ambaratonga fiarovana tsy misy menaka ambany kokoa noho ny KN95. 2. Fahombiazan'ny filtration samihafa. Ny saron-tava KN90 dia afaka manivana mihoatra ny 90% ny sombiny; Ny saron-tava KN95 dia afaka manivana mihoatra ny 95 isan-jaton'ny zavatra sombiny. 3. Fahasamihafan'ny rivotra samihafa. Ny mor ...Hamaky bebe kokoa »
Soso-kevitra amin'ny saron-tava tarehy sy sivily
Soso-kevitra amin'ny saron-tava tarehy sy sivily 1. Afaka hosasana sy hampiasaina indray ve ilay sarontava? Tsy afaka! Ny sarontava amin'ny ankapobeny dia lamba tsy tenona + sosona sivana + rafitra lamba tsy tenona. Ny fibre sivana eo afovoany dia tsy maintsy atao maina mba hiantehitra amin'ny fahaizan'ny adsorption electrostatic amin'ny filtration, ka ...Hamaky bebe kokoa »
Maninona ny sarontava no misoroka ny fihanaky ny viriosy?
Maninona ny sarontava no misoroka ny fihanaky ny viriosy? Karazan-fitaovana inona izy io? Matetika izahay dia milaza fa ny sarontava dia vita amin'ny lamba tsy tenona. Ny lamba tsy tenona dia lamba tsy tenona, mifanohitra amin'ny lamba tenona, izay vita amin'ny kofehy miendrika tendrena na kisendrasendra. Raha resaka sarontava, ...Hamaky bebe kokoa »
Global Vibrating Net Atomizer Market amin'ny 2021: SWOT Fandinihana ireo mpamily manan-danja ny fitomboan'ny sandan'ny CAGR | Marika ambony: Fikarakarana ara-pahasalamana Philips, fikarakarana ara-pahasalamana Omron, vokatra ara-pahasalamana GF…
Ny tatitra fikarohana farany momba ny tsena atomizer manjelatra manerantany dia manome fikarohana mitambatra momba ny valan'ny COVID-19 mba hanomezana vaovao farany momba ireo toetra mampiavaka ny tsena atomizer manodina. Ny tatitry ny sampam-pitsikilovana dia misy fanadihadiana mifototra amin'ny scena ankehitriny ...Hamaky bebe kokoa »
No Bounds, Inc. dia manambara ny fandefasana MediaDent mahomby
ORIENTMED, AZ, 23 feb 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - amin'ny alàlan'ny NewMediaWire - No Border, Inc. (OTC: NBDR), dia sahy manambara fa ny orinasan'ny orinasa MediDent Supply dia nandefa tamim-pahombiazana ny fanjaitra sy ny tsindrona ao anatin'ny ezaka tohano ny vaksinim-pirenena amerikanina ...Hamaky bebe kokoa »
ORIENTMED dia afaka manome fandefasana fohy amin'ny syringe 1ml
ORIENTMED dia nanitatra ny tsipika famokarana syringe 1ml. Ny fahafahan'ny famokarana dia avo roa heny. Na dia feno aza ny fandaharam-pamokarana. Saingy, mampanantena ny ORIENTMED fa raha vao manome baiko ny mpanjifa dia hanome laharam-pahamehana ny mpanjifa ny handefa vola 1 tapitrisa syr ...Hamaky bebe kokoa »
ORIENTMED dia nahavita ny tsipika famokarana syringe 1ml luer lock
Ny 1 martsa lasa teo, ny volan'ny ORIENTMED dia nanamboatra ny tsipika famokarana syringe 1ml luer lock. Miaraka amin'ny fivoaran'ny areti-mandringana manerantany dia mitombo ny filàna vaksinina. Mihabetsaka ny fangatahana syringes, indrindra ny avaratra 1ml. Ho setrin'ny fitomboan'ny adala amin'ny fitakiana syringes, ORIENTMED ...Hamaky bebe kokoa »
Fampidirana ny fampiasana malina ny syringe tsy misy fangarony 1mL azo esorina
Fotoana fandefasana: Feb-19-2021
Fampidirana ny fampiasana am-pahalalana ny 1mL azo atsofoka-manimba ny Syringe (aretin'ny anorectal) Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa ara-pitsaboana, ny syringe tsy misy fatra dia azo ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana. Ny syringe tsy misy fangarony 1mL azo ampiasaina dia tsy ampiasaina matetika fotsiny (ho an'ny fitsapana amin'ny hoditra sy ny fanindronana fisorohana), fa ...Hamaky bebe kokoa »
Inona ny fitsipiky ny basy nano spra?
Fotoana fandefasana: Feb-06-2021
Inona ny fitsipiky ny basy nano spra? Ny famaritana ny teknolojia atomisation dia ny maka DU ary mampiasa transducer ultrasonic, antsoina koa hoe wafer, rehefa manosika ny wafer ny circuit, mihetsiketsika ny wafer, ny rano ambonin'ilay fikororohana lasa potika kely dia kely, ny savaivony dia mahatratra ...Hamaky bebe kokoa »
Sakafo 60mm Petri, Saron-tava Kn95 azo ariana, Kitapo fitsapana vohoka, Tsy misy fonon-tanana azo ampiasaina amin'ny vovoka Nitrile, Dispenser Cover Shoe Auto, Saron'ny fitsaboana kiraro,